Sida Loo Helo Kanaalada Suuqgeynta Cusub | Martech Zone
Talaado, Janaayo 21, 2014 Talaado, Janaayo 21, 2014 Savannah Marie
"Runtii waxay ahayd meel aad u wanaagsan oo lagu wada xiriiro illaa iyo inta dadka kale ay ka bilaabayaan halkaas." Tani waa cabasho caadi ah oo ka dhex jirta hipster. Suuqleyda ayaa la wadaagaya jahwareerkooda; taasi waa, haddii aad ereyga "qabow" ku beddesho erayga "faa'iido leh."
Kanaalka suuqgeynta weyn ayaa waayi karaya dhalaalkiisa waqti kadib. Xayeysiistayaasha cusub fiiro gaar ah ayey u leeyihiin fariintaada. Kharashyada sii kordhaya ayaa ka dhigaya maalgashiga mid aan faa'iido badan lahayn. Isticmaalayaasha joogtada ahi way caajisaan waxayna u gudbaan daaqa cagaaran. Si aad hawlahaaga suuqgeynta uga dhigto mid faa'iido leh, mararka qaarkood waa inaad si isku mid ah u sameysaa.
Nasiib wanaagse, fursadaha xayaysiis ee cusub ayaa soo kordhaya markasta. Dhammaantood guuleysan maayaan mustaqbalka fog, laakiin sida kaliya ee lagu heli karo sharad wanaagsan waa in isha lagu hayo iyaga. Waa kuwan waxyaabo aad sameyn kartid si aad uhesho kanaallo cusub oo suuqgeyn ah oo aad u cusbooneysiiso isku-darka suuqgeyntaada.
Raac kuwa raacsan
Internetku aad buu u ballaadhan yahay oo cidina ma wada baari karto. Qalab wanaagsan oo raadraaca bogga ayaa kuu sheegi kara sida booqdayaashu u yimaadaan goobtaada, laakiin sidoo kale waxaad u baahan doontaa inaad ogaato halka kale ee ay tagayaan markay baxayaan. Martidaada ayaa laga yaabaa inay booqdaan boggag aadan xitaa aqoon u laheyn, markaa barnaamij dhig si aad ula socoto dhaqankooda markay ku soo booqan waayaan.
Maaddaama tiknoolajiyadda hadda socotaa ay illaa hadda socoto, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad iskaan ugu samayso macluumaadkan qaabkii hore ee hore. Haddii martidu soo dhejiso xiriiriyeyaasha, hubi goobahaas. Raadi cidda ay jecel yihiin iyo raacaan. Eeg sawirradooda Pinterest iyo Instagram. Waa geedi socod aan dhammaystirnayn sida ugu fiican, laakiin waxaad heli doontaa ugu yaraan fikrad guud oo ah halka loo socdo, gaar ahaan haddii aad raacdo booqdayaashaada ugu firfircoon.
Hubi ilaha Tusmada
Inta badan websaydhada cusubi waxay durbaba leeyihiin qorshe suuq-geyn ah oo ku saabsan meesha, taas oo macnaheedu yahay inay horeyba ugu hagaajiyeen boggooda iyo fiidiyowyadooda raadinta muhiimka ah (ugu yaraan, haddii ay si sax ah u sameeyeen). Marka xigta ee aad raadineysid waxyaabo cusub, hubi halka aad ka xulato xulashadaada oo ku dar boggagaas liistadaada kanaallo cusub.
Si loo dardargeliyo hawsha, waxaad diirada saartaa meelaha si joogto ah ugu dhajiya waxyaabaha wanaagsan. Ku bilow isku xirka mawduucan boggaaga, wakhti ka dib waxaad awoodi kartaa inaad weydiiso goobta inay soo celiso Nicmada. Sidoo kale, cabir qiimayaasha gujinta ee xiriiriyahan. Goobaha soo jiita inbadan oo kamid ah martidaada waxay noqon karaan dhul barwaaqo leh rajooyin cusub.
Si aad si sax ah u qabato shaqadaada, waa inaad ogaataa waxa adduunka ka socda, iyo waxa isbeddellada cusub iyo ikhtiraacyada cusub ee waddada ku soo dhacaya. Warbaahinta waa meel fiican oo lagu ogaan karo labadaba. Hubi iskudhafka joornaalada, goobaha danaha guud iyo daabacaadda warshadaha si aad uhesho isbeddello cusub, ciyaartoy cusub iyo fursado suuqgeyn cusub.
Samee waxaad caadiyan sameysid - iskaan cinwaannada cinwaannada oo jooji markay wax indhahaaga ku qabtaan. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah inaad ku baareyso ujeedo kale. Halkii aad kaliya ka ogaan lahayd waxa cusub, falanqee sheeko kasta si aad u go'aamiso haddii isbeddelka uu saameyn ku yeelan doono istiraatiijiyadda suuqgeyntaada. Haddii tani qaadato waqti aad u dheer, iska qor quudinta RSS oo cinwaankaaga ayaa laguu soo diri doonaa.
Kaliya Bilow Raadinta
Weligaa ma heshay daqiiqad bilaash ah oo aad bilawday daalacashada wax kasta oo ku soo kordhay madaxaaga? Qaarkood, tani waa hab lagu dilo waqtiga. Dadka kale, waa hab deg deg ah oo looga jawaabo su'aal dhib badan. Adiga ahaan, waxay kuu noqon kartaa wado lagu turunturoodo kanaal suuq cusub ah.
Qaado saacad ama wax la mid ah maalin kasta si aad wax ugu raadiso, si kasta oo ay doqon ama macno la’aan u tahay. Haddii aad rabto, waxaad ku bilaabi kartaa qoraal bilaash ah. Qor fikrad kasta oo madaxaaga soo marto ka dibna raadi wax kasta oo aad qortay. Baadhitaannada qaarkood wax badan uma qaddarin doonaan, laakiin maalmaha kale waxaad heli doontaa wax dhiirrigeliya fikrad nuxur leh, oo u rogi karta fursad isku xidhka isku xidhka.
Ma jiro qorshe suuq-geyn ah oo macaash ku sii jiraya weligiis. Ha fadhiisan oo ha ku raaxaysan natiijooyin fiican; sii wad raadinta wadiiqooyinka cusub ee suuq-geynta iyo dhisida istiraatiijiyad suuq-geyn ah oo aan duugoobayn.
Tags: isgaarsiintakanaalada suuqgeyntasuuq geyn farabadanbaraha bulshadaTechnology
Savannah Marie waa qoraa madaxbannaan oo xiiseeya suuqgeynta internetka. Waxay aad u jecel tahay raacitaanka SEO, suuqgeynta internetka iyo isbeddellada bulshada. Raac iyada Twitter iyo Google+.
Qiyaasta Suuqgeynta ee Muhiimka ah